म ग,र्भवती हुन चाहान्छु - Muldhar Post
म ग,र्भवती हुन चाहान्छु
पत्रपत्रिका खबर २०७५, १९ भाद्र मंगलवार 173 पटक हेरिएको
पछिल्लो १० बर्षदेखि म बच्चालाई आफ्नो पे,टमा हु,र्काउन र उसलाई जन्म दिने सपना देखिरहेको छु । तर, म बच्चा सँधैका लागि आफूसँग राख्न चाहान्न, न त म आमा नै बन्न चाहान्छु । यसै कारणले मैले ‘सेरोगेट मदर’ बन्ने निर्णय लिएँ, जसकारण प्रसुतीपछि मलाई बच्चा मसँगै राख्न नपरोस् । सेरोगेट आमा बन्ने विचार म २१ बर्ष हुँदा नै आएको थियो । म खाली गर्भवती हुनुको अनुभव लिन चाहान्छ् । म यति बुझ्न चाहान्छु, एउटा बच्चा मेरो शरीरभित्र कसरी विकसित हुन्छ र म उसलाई आफ्नो गर्भभित्र कसरी हुर्काउन सक्छु ? म आफ्नो शरीरमा आउने परिवर्तनलाई हेर्न चाहान्छु, महशुस गर्न चाहन्छु ।
मलाई मात्रै थाहा छ म गर्भावस्थाबाट के हासिल गर्न चाहान्छु । म ठूलो पेट चाहान्छु, बच्चालाई आफ्नो गर्भमा हुर्काउन चाहान्छु, म त्यस समयको अनुभव गर्न चाहान्छु, प्रसुतीपछि म बच्चा आफूसँग राख्न चाहान्न, यसमा केही गलत छ ? केही मेरा साथी मलाई भन्छन्, ‘जब बच्चा नै तिम्रो हुँदैन भने, तिमी आफ्नो शरीरलाई किन खराब गर्न चाहान्छौ ?’ । मेरी आमा पनि मेरो यस निर्णयलाई बुझ्नुहुन्न । उनका लागि यस्तो गर्नु मेरो गल्ती हो । तर, अन्तत यो मेरो फैसला हो । (गोपनीयताको सर्तमा बीबीसीको अन्तरवार्ताबाट लिएको एक अंश)